Hindisaha Sayniska iyo Teknolojiyada ee Australiya | Safarka Absolut
Luis Martinez | 20/04/2021 09:32 | La cusbooneysiiyay 20/04/2021 10:34 | Australia
Ma jiraan wax badan oo ah ikhtiraaca Australiyaanka ah ee sayniska iyo teknoolojiyadda sida kuwa laga helay dalalka kale ee adduunka. Sababta waa fududahay: Australia waa wadan yar iyo, si fudud, waqti uma helin in wax badan lagu xoojiyo dhinacyadaas.
Si kastaba ha noqotee, ummaddii badweynta waxay mar hore na siisay saamigeeda caddaaladda ah ee raadinta. Iyo, wixii ka sarreeya, ee muhiimad weyn u leh sayniska aadna loo jecelyahay dhanka farsamada. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato waxyaabaha Australia ay soosaartay sayniska iyo farsamada, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhriska
1 Waxyaabaha ugu waaweyn ee Australiyaanka ah ee sayniska iyo farsamada
1.1 Natiijooyinka Sayniska ee Australia
1.1.1 Isticmaalka penicillin
1.1.2 Qalabka wadnaha wadnaha
1.1.3 Tallaalka Papilloma-ka Aadanaha
1.1.4 Gelinta cochlear
1.1.5 Qalabka iskaanka 'ultrasound'
1.1.6 Ilaalinta deegaanka iyada oo loo marayo maraakiibta dhuxusha
1.2 Hindisaha tikniyoolajiyadda Australia
1.2.2 Sanduuqa madow ee diyaaradaha
1.2.3 Khariidadaha Google
1.2.4 Leyliska korontada
Waxyaabaha ugu waaweyn ee Australiyaanka ah ee sayniska iyo farsamada
Sidaan kuu sheegnay, horeyba waxaa u jiray tiro wanaagsan oo natiijooyin ah oo ay sameeyeen Australiyaanku. Sababtaas awgeed, iyo inaan si cad u qeexno bandhigeenna, waxaan ka hadlaynaa marka hore qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan sayniska iyo ka dib kuwa kale oo si gaar ah muhiim ugu ah tikniyoolajiyadda.
Natiijooyinka Sayniska ee Australia
Kuwan ku saabsan, ikhtiraaca Australiya ayaa ka faa'iideystay caafimaadka aadanaha (sida aan isla markiiba arki doonno, xitaa waxay ku lug leeyihiin penicillin) iyo at deegaanka. Qaar ka mid ah natiijooyinkaan ayaa ah waxa aan kuu sharixi doonno.
Qof kastaa wuu ogyahay in penicillin uu ahaa raadinta Ingiriiska Alexander Fleming sanadkii 1928. Si kastaba ha noqotee, si aan si fiican loo aqoon ayaa ah inay ahaayeen Australiyaanka Howard W. Florey iyo jarmalka Ernst B. Silsilad yaa u qaabeeyey habka loogu talagalay soosaariddeeda tirada badan, oo ah wax aakhirka badbaadin doona malaayiin naf aadam ah. Xaqiiqdii, markii Fleming uu helay Nobel Prize sanadii 1945, wuxuu isla qabtay labadan asxaab.
Huursi lagu sharfayo Ernst B. Chain
Qalabka wadnaha wadnaha
Qalabkan caafimaad wuxuu u oggolaanayaa bukaannada wadnaha inay ku hayaan kooda garaac joogto ah. Waxay u dirtaa cabashooyin koronto oo yaryar xubinta si ay uga caawiso inay sidaas sameyso. Waxaa alifay aqoonyahan cilmiga fiisigiska Waab Edgar iyo dhakhtarka Marc Lidwill, labadaba Australia, horaantii 1920. Hase yeeshe, isticmaalkeedu ma noqonin mid caam ah ilaa XNUMXs.
Tallaalka Papilloma-ka Aadanaha
In kasta oo khubaro kale ay sidoo kale soo dhexgaleen, tallaalkani sidoo kale wuxuu ka mid yahay hal-abuurka sayniska iyo tikniyoolajiyadda ee Australiya iyada oo ku habboon. Waxay ahaayeen laba aqoonyahan oo ka tirsan Jaamacadda Queensland, Ian Fraser y Jian Zhou, kaasoo ku guuleystay inuu abuuro qayb la mid ah virus-kan oo xoojiyay habka difaaca jirka ee ka hortagga ah.
Qalabkani wuxuu ka caawiyay boqolaal kun oo dhagoolayaal ah inay hagaajiyaan maqalkooda. Waxaa lagu beeray madaxa waxayna maamushaa kicinta neerfaha maqalka. Waxay ahayd Ceeb Graeme, bare ka ah Jaamacadda Melbourne, oo alifay. Aabihiis waxaa ku dhacay maqal la'aan, intii uu isku dayay inuu caawiyo, wuxuu soo helay qalabkan waxtarka badan leh.
Qalabka iskaanka 'ultrasound'
Qalabkan caafimaad ee maanta loo adeegsado sameynta ultrasound Waxaa abuuray Laboratory Australian Acoustics Australian, oo markii dambe si sax ah loogu beddelay Machadka Ultrasound. Soosaarayaashoodu waxay heleen dariiq ay ku qabsadaan dhawaaqyada 'ultrasonic' ee ka soo baxa unugyada jidhkeena una beddelaan sawirro. Ganacsigeedu wuxuu bilaabmay 1976.
Ilaalinta deegaanka iyada oo loo marayo maraakiibta dhuxusha
Sidaad ogtahay, Great Barrier Reef waxay ku taal waqooyi-bari Australia. Waxaa jira in kabadan laba kun iyo shan boqol oo kilomitir oo qaabdhismeedka biyaha hoostiisa mara oo hadda khatar kujira. Waxaa laga yaabaa in tani tahay sababta dadka Australiyaanka ah ay had iyo goor safka hore uga jireen Baaskiilada.
El Machadka Australia ee Sayniska Badaha horumariyo dhowr mashruuc oo lagu ilaalinayo deegaanka. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah midka loogu talagalay beeraha dhirta la xakameeyo. Ujeeddadeedu waa in lagu soo celiyo reef-yada xaaladdooda dabiiciga ah. Dhanka kale, kuwani waa nooleyaal wax ku biiriya dheelitirka deegaanka badaha iyo in laga ilaaliyo saameynta uu isbedelka cimilada ku leeyahay.
Hindisaha tikniyoolajiyadda Australia
Hindisaha tikniyoolajiyadeed ee ugu caansan Australiya ayaa shaki la’aan ah wifi, oo aan ka hadli doonno tan xigta. Laakiin waxaa jira kuwa kale oo iyaguna u adeegay hagaajinta amniga hawada ama ujeedooyin kale oo kala duwan. Aan aragno iyaga.
Xidhiidhka wireless-ka ee internetka ayaa u yimid inuu fududeeyo isticmaalka tan guryaha iyo xafiisyada. Qalab noocan oo kale ah oo waxtar leh waxaa u sabab ah saynisyahanka reer Australia John O'Sullivan iyo kooxdiisii ​​la shaqaysay Sidney. Dhammaantood waxay ka tirsanaayeen CSIRO, oo ah jir ka mid ah Commonwealth u heellan kor u qaadista cilmi-baarista sayniska iyo farsamada.
Sanduuqa madow ee diyaaradaha
Qalabkan ay diyaaradaha aduunku maanta ku daraan wuxuu u adeegaa, sidaad ogtahay, inaad ku ogaato waxa markabka ka dhaca inta lagu jiro daqiiqadaha shilka ka hor. Dhammaan wada sheekaysiga duuliyaha iyo xuduudaha diyaaradda ayaa lagu duubay, taas oo waliba aan la burburin karin. Ninkii hindisay wuxuu ahaa Ustaraaliya David warren, kaasoo si hufan aabihiis ugu waayey shil diyaaradeed.
Kaliya maahan wax ku biirinta amniga badweynta. Sanadkii 1965, Jack Grant, shaqaale ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee Quantas, ayaa abuuray boodbooda xaaladaha degdegga ah. Waxaa loo adeegsadaa in hoos loo dhigo rakaabka ka dib soo degid xun.
In kasta oo aan markaa loogu yeedhin markaa, qalabkan aadka waxtarka u leh waxaa qayb ahaan abuuray Australiyaanka Stephen Ma y Neil Gordon oo ay weheliyaan Danes Lars iyo Jens Rasmussen horaantii XNUMX. Goor dambe ayay ahayd, markii hal-abuurnimadii ay iibsatay Google, in ay heshay magaceeda hadda.
Sanduuqa madow ee diyaaradda
Haddii aad jeceshahay DIY, waxaad ogaan doontaa inta qalabkani shaqada kuu fududeeyo. Hagaag, sidoo kale waa ikhtiraac Australiya ah. Xaaladdan oo kale, waxaa sabab u ah injineerka korantada Arthur James, oo kii ugu horreeyay sameeyay horaantii 1889. Dabcan, markaa, ma ahayn mid la qaadi karo, laakiin aad ayuu uga weynaa. Si kastaba ha noqotee, waxay awood u laheyd inay dalooliso xitaa dhagxaan.
Qaboojiyaha dhaqameed ee maanta u muuqda mid lagama maarmaan u ah guryaheena wuxuu jiraa qiyaastii boqol iyo konton sano. Markii aysan jirin, cuntada waxaa lagu hayn jiray meelaha ugu qabow guryaha. Arrinta xiisaha lihi waxay tahay inay maamuleyaal ka ahaayeen shirkad khamri ka sameysata Australia oo shaqaalaysiisay James Harrison si loo xaliyo dhibaatooyinka ilaalinta cabitaankiisa 1856.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah Hindisaha sayniska iyo farsamada Australiya. Sidaad u aragto, wax ku biirinta dalka badweynta ee horumarinta bini-aadamnimada waxay ka badneyd xiisaha oo, ka sii sareysa, muhiim.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Hindisaha sayniska iyo farsamada Australiya
Waxa ay yiraahdaan ama sharraxaan aad bay u wanaagsan yihiin
Kujawaab ana mercedes villalba G.
fiican in la sharaxo